धनगढी बाहिरियो,काठमाडौं दुई खेल अगावै प्ले अफमा ! | Hamro Khelkud
धनगढी बाहिरियो,काठमाडौं दुई खेल अगावै प्ले अफमा !
शनिबार, फागुन ४, २०७५
धनगढी (हाम्रो खेलकुद) – तेस्रो संस्करणको रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएलको) दशौं खेल वर्षाका कारण सम्भव नहुँदा महेन्द्रनगर युनाइटेड र धनगढी स्टार्सले पनि १-१ अंक बाडेंका छन् । यससँगै सोमपाल कामी कप्तान रहेको साविक विजेता धनगढी समुह चरणबाटै बाहिरिएको छ ।
बिहीबार राती र शुक्रबार परेको पानीले गर्दा फाप्ला क्रिकेट मैदानमा हिलोको कारण खेल्न नमिलेपछि दुवै टोली अंक बाँड्न बाध्य भए । चार खेलमा ३ मा हार र १ मा अंक बाँडेको धनगढी भने एक खेल अगावै समुह चरणबाटै बाहिरिने पहिलो टिम बन्यो । चार खेलमा मा २ मा हार र २ मा अंक बाँडेको महेन्द्रनगरको झिनो अंक गणितिय संभावना बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै आजको पहिलो खेलमा विराटनगर किंग्स र काठमाडौं गोल्डेन्सले मैदान हिलो भएको कारण १-१ अंक बाँडेका थिए । धनगढी र महेन्द्रनगरले अंक बाँडेपछि शीर्षस्थानमा रहेको काठमाडौं दुई खेल अगाडीनै प्लेअफ पुगेको छ । अब बाँकी दुबै खेल हारेपनि अन्तिम चारमा रहेर काठमाडौं प्ले अफ खेल्नेछ ।
विराटनगर ४ खेलमा १ मा जित र १ मा हार र २ मा अंक बाड्दै ४ अंकका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै सुरुवाती दुई खेल जितेको सीवाईसी अत्तरिया ४ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने ३ खेलमा २ मा जित र १ मा हारका साथ ४ अंकका साथ रुपन्देही च्यालेन्जर्स तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।